Acupuncture Ntị Maka Mbelata ịdị arọ: Usoro achọtara iji belata abụba afọ, belata eriri afọ - Echiche 2022
Acupuncture Ntị Maka Mbelata ịdị arọ: Usoro achọtara iji belata abụba afọ, belata eriri afọ
Were ya na a mara ya n'akụkụ elu ntị gị ugboro ole na ole ma gwa gị na ị ga-enwe ike ịkwatu uwe ogologo ọkpa. Emeela? N'ezie, a na-akpọ usoro a acupuncture auricular, na nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya achọpụtala na omume dị otú ahụ nwere uru dị ukwuu maka ịlalata ibu n'úkwù.
Acupuncture nke ntị na-adabere n'echiche bụ na auricle mmadụ, akụkụ elu nke ntị, na-anọchi anya ụbụrụ dum e depụtara na mpụga. Dị ka ụdị ọgwụgwọ ahụ zuru oke, acupuncture auricular na-elekwasị anya ụfọdụ omume ma ọ bụ akụkụ ahụ site na obere agịga na mpaghara ntị kwekọrọ. Iji duzie ọmụmụ ihe ha, ndị nchọpụta sitere na Mahadum Kyung Hee nke South Korea lekwasịrị anya isi ihe ise kpọmkwem na ntị mpụta nke ihe dị arọ 91: splin, afo, agụụ, endocrine, na ụmụ nwoke. (Ma ọ bụghị ya, a maara dị ka “ọnụ ụzọ ámá Chineke” ma ọ bụ “Master point,” e kweere na ndị shen-men na-ebelata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa nile. Ọ bụ ihe na-adịghị mma nke acupuncture ntị.)
Ndị na-eme nchọpụta chọpụtara na na njedebe nke izu asatọ nke ikpe ahụ, ihe ọmụmụ 58 na-eme nchọpụta (isi ise na otu isi) gosipụtara mbelata dị ukwuu (6.1 vs. 5.7%) na nchịkọta anụ ahụ ha (BMI). Ka ọ dị ugbu a, isiokwu ndị nọ n'òtù sham ahụ egosighị ọdịiche ọ bụla a pụrụ ịtụte atụ. Ndị hụrụ ihe ịga nke ọma na-enwe obi ụtọ n'úkwù slimmer ma belata abụba afọ. Ndị na-eme nchọpụta na-ekwupụta ihe ịga nke ọma ha ruo na uru a maara nke ọma na-eme ka metabolism dịkwuo elu.
"Mmụba metabolic ọrụ na-akwalite metabolization nke abụba ma na-ebute oke ibu," ka ndị nchọpụta kọwara. "Site na usoro a, nsonaazụ anyị na-egosi na ọgwụgwọ m bara uru karịa ọgwụgwọ II na metabolizing abụba afọ."
Ndị na-ede akwụkwọ na-akọwa ọtụtụ njedebe na ọmụmụ ihe ha, ya bụ obere ihe nlele na enweghị ike ijikwa maka ikpochapụ otu placebo. Dị ka ndị nchọpụta ahụ si kwuo, "ndị so na otu a nwere ike nyochaa uwe nrapado dị na ntị ha ma hụ na ọ dịghị agịga." Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ nkwụsị ahụ dị elu nke ukwuu na pasent 36, na-egbochi nguzozi - ya mere, ọdịiche - n'etiti otu abụọ ahụ.
Otú ọ dị, dị ka omume n'ozuzu, acupuncture ntị aghọwo ihe a ma ama. Ndị egwuregwu bọọlụ mba ụwa na ndị na-eme ihe nkiri enweela mmasị na ọgwụ ndị China oge ochie. Kate moss ejirila ya gbuo ihe riri ahụ. Roman Abramovich nke Chelsea Football Club ejiriwo ya mee ihe, nke kwekọrọ na ọmụmụ ihe ugbu a, iji felata.
"Ọ nwere ike ịbụ ihe kachasị ọhụrụ a ma ama," Nick Dalton-Brewer, onye na-ahụ maka acupuncturist na London's Hale Clinic gwara Daily Mail, "Ma acupuncture auricular ejiriwo, n'ezie, ejirila ọtụtụ puku afọ na nkà mmụta ọgwụ ndị China, ma na-enye aka nke ukwuu. n’ịgwọ ụdị nsogbu nile, site n’ihe ahụ riri ahụ ruo n’ihi ụra nke ọma, mgbu nkwonkwo, na ọmụmụ.”